काठमाडौँ १० : मौनअवधि नजिकए पनि चुनावी चटारो उस्तै – Medianp
सोमबार, ०५, कार्तिक, २०७५
काठमाडौँ १० : मौनअवधि नजिकए पनि चुनावी चटारो उस्तै
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर १८, २०७४१०:०६
काठमाडौँ, १८ मंसिर । मौनअवधि शुरु हुन लागे पनि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मतदातासम्म पुग्ने चटारो भने उस्तै रहेको छ । यस्तै चटारोका बीच काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का उम्मेदवार पनि आजको दिनलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न लागिपरेका छन् ।
सो क्षेत्रमा बाम गठन्धनका तर्फबाट हितमान शाक्य र नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री समेत रहनुभएका राजन केसी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन जितेका थिए भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने पराजित भए ।
अध्यक्ष दाहाललाई केसीले पराजित गर्दा केसी निकै चर्चित बनेका थिए । यस पटकको चुनावलाई आंकलन गर्ने पनि सो क्षेत्रमा वाम गठबन्धन र काँग्रेसबीच नै खास अर्थमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छ । एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र मानन्धर वाम गठबन्धनका तर्फबाट निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजकको रुपमा रहेका थिए । उनी समानुपातिक उम्मेदवार छन् ।
एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल गर्दा सो क्षेत्र माओवादीको भागमा परेपछि मानन्धर समानुपातिकतर्फ बसे । वाम गठबन्धनले प्रदेशसभातर्फ ‘क’ मा दिलीप मर्हजन र ‘ख’ मा रमा आलेमगरलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
काँग्रेसले प्रदेशसभा ‘क’ मा पुकार महर्जन र ‘ख’ मा धर्मनन्द श्रेष्ठलाई अगाडि सारेको छ । यस्तै नयाँ शक्ति नेपालका तर्फबाट पञ्चलाल मर्हजनलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । यस्तै प्रदेशसभा ‘क’ बाट केशरत्न ब्रजाचार्य र प्रदेसभा ‘ख’ मा होमप्रसाद रिमाल उम्मेदवार छन् ।
यस्तै विवेकशील साझा पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रदीप ढकाल र प्रदेशसभा ‘क’ देवबहादुर मर्हजन र प्रदेशसभा ‘ख’ मा एलिशा महर्जनलाई मैदानमा उतारेको छ । सो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्रसहित १५ उम्मेदवार मैदानमा छन् भने प्रदेशभातर्फ कुल १४ उम्मेदवार मैदानमा छन् ।
काँग्रेसका तर्फबाट सो क्षेत्रका उम्मेदवार राजन केसी घरदैलो र कार्यकर्ता भेटघाटलगायतका काम सकिएको र मौनअवधि शुरु हुनु अगाडिसम्म निर्वाचन केन्द्रित काममा नै सरिक हुने बताए । आफूले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक सम्हालेको जानकारी दिँदै केसीले आफू स्थानीय पनि भएको र मतदाताले फेरि पनि आफूलाई मतदान गर्ने विश्वास गरे ।
“मलाई सम्पूर्ण मतदाताको घर कता फर्केको छ, को को घरमा छन् भन्ने पनि थाहा छ, मैले ती सबै मतदातालाई भेटें र मत दिन आग्रह गरेको छु” केसीले भने ।
उता वाम गठबन्धनका उम्मेदवार शाक्यले पनि काठमाडौँ दश आफ्ना लागि नयाँ क्षेत्र नभएको र वामपन्थी शक्तिको विगतदेखि कै आधारभूमि भएकाले जित निकाल्न कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ बाट विजयी भएका शाक्य संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा भने मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मा रहेका कारण चुनावमा सहभागी भए ।
स्थानीय नेतासमेत रहनुभएका प्रदेशसभाका ‘क’ का उम्मेदवार दिलीप महर्जन वामपन्थी शक्तिको आधारभूमि भएको, स्थानीय जनताको माग र अपेक्षाको समेत वाम गठबन्धनले सम्बोधन गर्ने भएकाले आफूहरुको जित सुनिश्चित भएको बताउँछन् ।
सो निर्वाचन क्षेत्रमा कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका सबै वडा र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका ११ वडा पर्दछ । कीर्तिपुरमा वाम गठबन्धनको ११ हजार ३६९ मत छ भने काँग्रेसको छ हजार ६१६ मत पाएको छ । दक्षिणकालीमा छ हजार ७४९ वाम गठबन्धनले ल्याउँदा काँग्रेसले चार हजार ६९८ मत पाएको थियो ।
यस्तै चन्द्रागिरिमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेसको भन्दा बढी मत वाम गठबन्धनले पाएको छ । सो निर्वाचन क्षेत्रमा ७१ हजार २०१ मतदाता छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपालका प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवार गणेश कुँवरले उम्मेदवारी नै त्यागेर वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छन् । सो पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्ने जनाएका छन् ।
जनमोर्चाका नेता कुँवरले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बनेको वाम गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र विजयी गराउने लक्ष्यसहित आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताउँछन् । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारसमेत रहेका सुरेन्द्र मानन्धर वामपन्थी जनमत नै बढी भएका कारण काठमाडौँ १० मा आफूहरुको विजय सुनिश्चित रहेको बताउँछन् ।
वाम तालमेलपछि काठमाडौँ १० का मतदातामा समेत नयाँ उभार आएको छ” मानन्धरले भने । तर काँग्रेसका उम्मेदवार केसी भने वाम गठबन्धनले आफूलाई केही फरक नपार्ने दाबी गर्छन् । केसीले आफू निर्वाचित भएपछि सो निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ वटा ठूला परियोजना सम्पन्न भएको, चालु आवमा ६३ वटा आयोजना रातो किताबमा पार्न सफल भएको र १२ वटा ठूला परियोजना अगाडि बढाएका कारण स्थानीयले विजयी गराउने बताए ।
काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा ‘क’ का उम्मेदवार पुकार महर्जन काँग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र विश्वासलाई जनताले अनुमोदन गर्ने बताउँछन् । नयाँ शक्तिका उम्मेदवार पञ्चलाल मर्हजन जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेका कारण यसपटक काठमाडौँ १० मा आफ्नो पार्टीको विजय सुनिश्चित रहेको दाबी गर्छन् । तर स्थानीय भने वाम गठबन्धन र काँग्रेसबीच नै खास प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछन् ।
कीर्तिपुर नपा–३ का मतदाता राम मानन्धर ठूला पार्टीका उम्मेदवारबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने आफूलाई लागेको बताउँछन् । आज मध्यरातसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने भएकाले राजनीतिक दलका उम्मेदवारले आजै चुनावी अभियानलाई मैजारो गर्ने भएका छन् ।
दाङमा चुनावी चहलपहल
बदला लिने दाउमा लिङ्देन, विरासत जोगाउने सोचमा सिटौला
श्रीमतीले छोडेर गएपछि दुई छोराको हत्या गरी बाबुलेसमेत आत्महत्या गरे
बिरामीसँग नर्सले टीका लगाएको तस्बिर भयो भाइरल
राष्ट्रपति भण्डारीसँग पूर्वकामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले घुँडा धसेर टीका थापेको तस्बिर भाइरल
नेकपा नेता थापाको कटाक्षः कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले टिका लगाउनु कुन गणतन्त्र हो ?
नेकपा नेता जनार्दन शर्माको निर्देशनमा कांग्रेसले आयोजना गरेको खेलकुद कार्यक्रममा प्रहरीको आतंक
दशैँमा नयाँ नोटसँगै नक्कली नोट पनि देखिन थाले ! कसरी चिन्ने नक्कली नोट ?
११ हप्ताको बच्चालाई आयो अहिलेसम्मक अचम्मको दाँत
८ तस्विरमा हेर्नुहोस श्रीको मृत्यु पछि दशैँमा टिका र जमरा लगाएकी स्वेता
महिलाको पहिरन संरक्षण गर्छौं भन्दै यी दुई युवकले सारी लाएर हिडेपछि भयो भाइरल
कोरियन केटीसगँ कसरी भयो त नेपाली केटोको विहे ,पढौ यो रहस्यमय प्रेमकहानी
विजयादशमीको अवसरमा सर्लाहीका प्रतिभालाई सम्मान
कबिताको जन्मदिनमा ‘बबी’का हिरो उमेशले श्रीमतीलाई पठाए सबैलाई रुवाउने यस्तो संदेश